Pita Nke Abụọ 3:1-18
Ndị mmadụ ga-eji mbibi a ga-ebibi ndị ọjọọ mere ihe ọchị (1-7)
Jehova anaghị egbu oge imezu nkwa ya (8-10)
Chebaranụ ụdị mmadụ unu kwesịrị ịbụ echiche (11-16)
Eluigwe ọhụrụ na ụwa ọhụrụ (13)
Kpacharanụ anya ka a ghara idufu unu (17, 18)
3 Ndị m hụrụ n’anya, akwụkwọ ozi a bụ nke abụọ m na-edetara unu. Achọrọ m ichetara unu ka unu gbaa mbọ na-eche echiche nke ọma otú m gwara unu n’akwụkwọ ozi nke mbụ.+ 2 M na-ede ihe a ka unu cheta okwu ndị amụma dị nsọ kwuru n’oge gara aga na ihe Onyenwe anyị na Onye Nzọpụta anyị kụziri, nke ndịozi* kụziiri unu. 3 Ihe unu kwesịrị ibu ụzọ mara bụ na n’oge ikpeazụ, a ga-enwe ndị na-achị ihe dị mma ọchị, ndị na-emekwa ihe ọjọọ na-agụ ha agụụ.+ 4 Ha ga na-asị: “O kwere unu nkwa na ọ ga-abịa, gịnị mere na ọ bịabeghị?+ Leenụ, o nwebeghị ihe gbanwerenụ kemgbe nna nna anyị hà nwụrụ.* Ihe niile ka dị nnọọ otú ha dị kemgbe Chineke kere mmadụ.”+ 5 Ha kpachaara anya na-eme ka ọ̀ bụ na ha amaghị na eluigwe dị kemgbe oge ochie nakwa na Chineke kwuru okwu, ala esi na mmiri pụta ma dịrị n’etiti mmiri.+ 6 E jikwa mmiri bibie ụwa nke oge ahụ mgbe mmiri tojuru ebe niile n’ụwa.+ 7 Ọ bụkwa ihe Chineke kwuru ga-eme ka a hapụ eluigwe na ụwa dị ugbu a ruo mgbe a ga-eji ọkụ bibie ha n’ụbọchị a ga-ama ndị na-anaghị asọpụrụ Chineke ikpe ma bibie ha.+ 8 Ma, ndị m hụrụ n’anya, unu echezọla na otu ụbọchị n’anya Jehova* dị ka otu puku afọ, otu puku afọ dịkwa ka otu ụbọchị n’anya ya.+ 9 Jehova* anaghị egbu oge imezu nkwa ya,+ dị ka ụfọdụ ndị chere. Kama, ọ na-enwere unu ndidi n’ihi na o nweghị onye ọ chọrọ ka e bibie, kama ọ chọrọ ka mmadụ niile chegharịa.+ 10 Ma, ụbọchị Jehova*+ ga-abịa otú onye ohi si abịa.+ N’ụbọchị ahụ, eluigwe ga-eji oké ụzụ laa n’iyi.+ Ihe ndị dị n’eluigwe na n’ụwa ga-adịkwa oké ọkụ wee gbazee. A ga-agbakwa ụwa na ọrụ ndị a rụrụ n’ime ya ọkụ.*+ 11 Ebe a ga-esi otú a gbazee ihe ndị a niile, chebaranụ ụdị mmadụ unu kwesịrị ịbụ echiche. Unu kwesịrị ịna-akpa àgwà dị nsọ, na-efe Chineke, 12 na-echere ụbọchị Jehova,* burukwa ya n’uche.+ N’ụbọchị ahụ ka a ga-agba eluigwe ọkụ,+ ya agbazee, ihe ndị dị n’eluigwe na n’ụwa ga-adịkwa oké ọkụ wee gbazee. 13 Ma e nwere eluigwe ọhụrụ na ụwa ọhụrụ o kwere ná nkwa anyị na-atụ anya ha.+ Ezi omume ga-adịkwa* na ha.+ 14 N’ihi ya, ndị m hụrụ n’anya, ebe unu na-echere ihe ndị a, gbalịsienụ ike ka Chineke hụ n’ikpeazụ na unu dị ọcha, na unu anaghị akpa àgwà ọjọọ ọ bụla nakwa na unu na ya dị ná mma.+ 15 Werekwanụ ndidi Onyenwe anyị na-enwere unu ka nzọpụta, otú ahụ Pọl, nwanna anyị anyị hụrụ n’anya, detaara unu n’akwụkwọ ozi n’ihi amamihe e nyere ya.+ 16 N’eziokwu, o deela banyere ihe ndị a n’akwụkwọ ozi ndị o detaara unu. Ma, ụfọdụ ihe o dere siri ike nghọta, ndị na-aghọtaghịkwa ha na ndị na-akwụsighị ike n’okwukwe na-agbagọ ihe ndị ahụ otú ha na-agbagọkwa ihe ndị ọzọ e dere n’Akwụkwọ Nsọ. A ga-ebibi ha maka ihe a ha na-eme. 17 N’ihi ya, ndị m hụrụ n’anya, ebe unu matarala ihe ndị a, kpacharanụ anya ka mmehie ndị na-enweghị ihe ha ji iwu kpọrọ na-eme ghara idufu unu, unu agharazie isi ike n’okwukwe.+ 18 Kama na-amụtakwunụ gbasara Onyenwe anyị na Onye Nzọpụta anyị bụ́ Jizọs Kraịst, na-agbakwanụ mbọ ka ọ na-emekwuru unu amara. Ka a na-eto ya si ugbu a ruo mgbe ebighị ebi. Amen.
^ Na Grik, “ndịozi unu.”
^ Na Grik, “hiri ụra ọnwụ.”
^ Ma ọ bụ “n’anwụ.”
^ Na Grik, “ga-ebikwa.”